Chii chekuita kana imwe yeAirPod yako isiri kushanda nemazvo? | IPhone nhau
Chii chaunofanira kuita kana imwe yeAirPod yako isiri kushanda nemazvo?
AirPods ndeimwe yezvigadzirwa zvinonyanya kukosha uye zvinoshanda izvo zvine Big Apple. Uye, kunyangwe isu tichifunga kuti hachisi chigadzirwa chakadai, chiri, sezvo ichida firmware yekushanda kwayo. Dambudziko rinowanikwa riinhi mahedhifoni ese anomira kushanda kana imwe chete sezvo isu tisina chero skrini inotitaurira zvinogona kunge zvichiitika. Nekudaro, nerubatsiro rwechigadzirwa chaunoda kuwiriranisa nacho, tinogona kugadzirisa mamiriro ezvinhu mune imwe yeaya maviri (kana maviri maAirPods asingatambe zvemukati nenzira kwayo. Saka, Chii chandinoita kana ndiri mune ino mamiriro?
Iyo AirPods inogona kunge yakagadziriswa zvisirizvo, ngatirege kurasikirwa nekutonhorera kwedu
Kuti chishandiso chakatidhurira anopfuura ma150 euros chinomira kushanda chingave chinhu chinokurudzira kuparara kwekutya kutanga. Nekudaro, isu takatengawo mhando uye vimbiso, saka isu tinofanirwa dzikama, ndicho chinhu chekutanga. AirPods mahedhifoni eBluetooth anozvibatanidza otomatiki kune yekupedzisira paired mudziyo, saka kana ikasadaro kana isu tisingakwanise kuvaita kuti varidze mimhanzi, dambudziko rinogona kungova iyo AirPods kana pafoni yedu, hakuchina.
Chinhu chekutanga chatinofanira kutarisa ndechekuti maAirPod anobhadhariswa, saka tichavaisa mubhokisi uye kumirira kuti skrini ivhure neruzivo pane yedu iPhone. Kana mahedhifoni akabhadhariswa, isu tinotora matanho. Isu tinoyedza kubatana zvakare uye kana ichiri kusanzwika kune rimwe kana mativi ese, isu tichaita a kugadzirisa zvakare kubatana nemahedhifoni, zvinotevera:
Tora iyo iPhone kana iPad uye enda kuZvirongwa> Bluetooth> uye Dzvanya pa "i" inoonekwa kurudyi kwezita remahedhifoni ako.
Dzvanya pa «Skip mudziyo»
Izvozvi zvatave kusiira maAirPod, isu tichafanirwa kubaya bhatani riri kumashure kweye AirPods kesi kwemasekondi mashoma kusvika yapenya chena. Panguva iyoyo iyo yekubatanidza skrini ichaonekwa pane yedu kifaa uye isu tichaenderera mberi nekuita pairing sezvatakaita kekutanga nguva. Nenzira iyi isu tadzorera kubatana ne iPhone yedu uye, musimboti, dambudziko rinofanira kugadziriswa.
Kana dambudziko richiripo, tinokurudzira kuti uende kuApple Store iri padyo kana kuti utaure neApple kuburikidza nebasa rayo rekutsigira riri pawebhusaiti yepamutemo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Chii chaunofanira kuita kana imwe yeAirPod yako isiri kushanda nemazvo?
Vagadziri veApp vanoda kupihwa mvumo yekutanga kubva kuhurumende yeChinese kuti vape mapurogiramu avo paApp Store
Vocolinc Smart Outlet uye Power Strip, smart plugs eKeKKit